(Daawo)-Taliska Ciidanka Badda Puntland oo ka hor yimid Go,aankii Baarlamaanka DFS | Puntland
(Daawo)-Taliska Ciidanka Badda Puntland oo ka hor yimid Go,aankii Baarlamaanka DFS
Mar 19, 2018 - Aragtiyood
Taliyaha Ciidamada xeebaha Puntland Admiral C/risaaq Diiriya Faarax ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay magaaladda Bosaso waxa uu kaga hadlay kaalinta dowladda imaraadku ay ku leedahay ciidamada Badda Puntland iyo go’aankii barlamaanka Federaalka ee dalka lagaga mamnuucay Shirkadda DP World.
Mar uu ka hadlyay Go’aankii barlamaank Federaalku uu dalka uga mamnuucay inay ka shaqayso shirkadda DPWorld, wuxuu sheegay inuusan jirin khilaaf u dhexeeya dowladda Federaalka iyo dowladda Imaraadka Carabta. Go’aanka barlamaankuna uusan wax saamayn ah ku yeelan taageerada Imaraadku uu siiyo Ciidamada Badda Puntland.
Ciidamada Ilaalada xeebaha Puntland oo la asaasay 7 sanno ka hor waxay ka mid yihiin ciidamada ugu qalabka iyo tayada fiican ee dowladda Puntland leedahay, waxay ka howlgalaan buuralayda Cal Miskaat iyo Cali Bari, iyagoo halkaasi kula dagaalama Kooxaha Alshabaab iyo Daacish. sidoo kale waxay sugaan amniga magaalooyinka waaweyn ee Puntland.